Shiinaha Shaandhaynta nus-maaskaro FFP2, soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha CE0598 | Shanyou
1. Isticmaal keliya only
3. Wax aan sun ahayn oo aan cuncun lahayn ； 5-wiqiyadood, Faahfaahinta Waxyaabaha: PP lakab dibedda ah, Lakabka hawada ee kulul, Mashiinka PP-da dhalaalaya lakabka sifeynta sare, PP dhalaalaya ayaa la afuufay lakabka sifeynta sare, PP lakab gudaha ah
5. FFP2 waxay siisaa wasakhda sare iyo bakteeriyada waxtarka sifeynta. ；
6. FFP2 Cabbirka: 155 × 105mm
Waxyaabaha wajiga laga daboolo ee FFP2
Maaskarkani wuxuu bixiyaa difaac dhinacyo kala duwan ah sida warshadaha muraayadaha, macdanta, dhismaha, warshadaha dawooyinka iyo beeraha. Waxay si wax ku ool ah u joojisaa kiimikada budada ah. Maaskarkani wuxuu kaloo u adeegsan karaa difaac kahortaga fayrasyada neef-mareenka sida hargabka avian ama cillad daran oo daran oo neefsashada la xiriirta coronavirus (SARS), iyo sidoo kale bakteeriyada cudurka sambabaha iyo qaaxada.  Waxay la mid tahay maaskaro N95.
Hangzhou Shanyou Medical "SHAQO" waxay leedahay in ka badan 200 oo xariiq oo wax soo saar ah oo ku saabsan maaskaro FFP2 / FFP3 / KN95, awooddu waa qiyaastii 4 milyan oo kumbuyuutar / maalintii. Maaskaradayada 'FFP2' waxay heleen shahaadooyinka SGS CE iyo shahaadada Universal CE sida ku cad EN149: 2001 + A1: 2009 waxayna heleen SGS Reach Report. Hangzhou Shanyou Medical “SHAQO” waxay si adag u raacdaa qawaaniinta caalamiga ah si loo soo saaro alaabtayada, hubi in shay kasta uu buuxiyo qawaaniin gaar ah iyo shuruudaha macaamiisha. Sumadeena "SHAQADA" waxaa si ballaaran loogu ammaanay waxyaabo tayo sare leh.
Hore: Shaandhaynta nus-maaskaro FFP2, CE2163
Xiga: Maaskaro Wejiga La Tuuri Karo